Ny mpikaroka dia nahatonga ireo ordinateran'ny olona hitsidika tsotsotra ireo tranonkala izay nakaton'ny governemanta mandainga.
Tamin'ny volana martsa 2014, i Sam Burnett sy Nick Feamster dia nandefa Encore, rafitra iray hanomezana fe-potoana sy eran-tany amin'ny sivana amin'ny aterineto. Mba hanaovana izany, ireo mpikaroka, izay tao Georgia Tech, dia nandrisika ny tompon'ny tranonkala hametraka ity sombin-dahatsoratra madinika ity ho ao amin'ny rakitra avy amin'ny tranonkala:
Raha toa ka mitsidika tranonkala iray miaraka amin'ity sombin-dahatsoratra ity ianao, ny tranonkalanao dia hanandrana hifanerasera amin'ny tranonkala iray izay nanarahan'ireo mpikaroka ny sivana azo atao (ohatra ny vohikalan'ny antoko politika voarara). Avy eo, hitety ny mpikaroka anao ny navigateur web anao raha toa ka afaka mifandray amin'ny tranonkala mety ho voasakana (sary 6.2). Ankoatra izany, ireo rehetra ireo dia tsy hita maso raha tsy mijery ny tahiry HTML an'ny pejy Internet. Ireo pejy fangatahana pejy tsy hita maso dia matetika no mahazatra ao amin'ny tranonkala (Narayanan and Zevenbergen 2015) , saingy mahalana izy ireo no mahakasika ny ezaky ny (Narayanan and Zevenbergen 2015) mazava ny sivana.
Sary 6.2: Fahaizana momba ny fikarohana momba ny Encore (Burnett and Feamster 2015) . Ny tranonkala niandohana dia misy tsipika kely misy fametrahana ao anatiny (dingana 1). Ny ordinateranao dia manome ny pejy Internet, izay manindry ny asa fanatanterahana (dingana 2). Ny solosainanao dia miezaka ny miditra lasibatra, izay mety ho tranonkala vondrona politika voarara (dingana 3). Ny sivana, toy ny governemanta, dia mety manakana ny fidiranao mankany amin'ny lasibatra (dingana 4). Farany, ny solosainao dia mitatitra ny vokatr'ity fangatahana ity ho an'ireo mpikaroka (tsy aseho amin'ny sary). Burnett and Feamster (2015) tamin'ny alalana avy amin'ny Burnett and Feamster (2015) , sary 1.
Ity fomba fanodinana sivana ity dia manana toetra ara-teknika tena mahafinaritra. Raha manana tranonkala ampy ny tranonkala iray, dia ny Encore dia afaka manome ny fe-potoana maimaim-poana eran-tany izay zakan'ny tranonkala. Talohan'ny nanombohana ilay tetikasa, dia neken'ny mpikaroka ny IRB, izay tsy nety nandinika ilay tetikasa satria tsy "fikarohana ara-tsosialy" eo ambanin'ny Common Rule (ny fitsipika mifehy ny fikarohana ara-bola be indrindra ao Etazonia, raha mila fampahalalana bebe kokoa, jereo ny appendice ara-tantara ao amin'ny faran'ity toko ity).
Fotoana fohy taorian'ny nandefasana an'i Encore, na izany aza, Ben Zevenbergen, avy eo mpianatra mpianatra nahazo diplaoma, dia nifandray tamin'ireo mpikaroka mba hametraka fanontaniana momba ny fitsipiky ny tetikasa. Ny momba an'i Zevenbergen indrindra moa fa ny olona any amin'ny firenena sasany dia mety ho iharan-doza raha manandrana mitsidika tranonkala sarotra sasany ny solosaina, ary tsy nanaiky ny handray anjara amin'ilay fianarana ireo olona ireo. Raha nifototra tamin'ireny resaka ireny, ny ekipa Encore dia nanova ny tetikasa hanandrana handrefy ny sivana amin'ny Facebook, Twitter ary YouTube afa-tsy ny fisian'ny fikasana hiditra amin'ny tranokalan'ny tranonkala tsotra (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Taorian'ny nanangonana angon-drakitra nampiasa ity famolavolana fiovana ity, nisy lahatsoratra iray nanoritsoritra ny metodolojika sy ny vokatra sasantsasany dia natolotra tamin'ny SIGCOMM, fihaonambe momba ny informatika malaza. Ny komity fandaharam-pampianarana dia nankasitraka ny fandraisana ara-teknika amin'ny taratasy, saingy naneho ny ahiahiny mikasika ny tsy fisian'ny fanekena voamarina amin'ny mpandray anjara. Farany, nanapa-kevitra ny hamoaka ilay gazety ny komity fandaharam-pampianarana, saingy miaraka amin'ny fanambarana an-tsoratra izay maneho ny olana ara-tsosialy (Burnett and Feamster 2015) . Tsy mbola nampiasaina talohan'i SIGCOMM ny fanambarana sonia toy izany ary ity tranga ity dia nitarika adihevitra fanampiny teo amin'ireo mpahay siansa momba ny toetry ny etika ao amin'ny fikarohana (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) .